ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: October 2010
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ “ဂီရိ”မုန်တိုင်း လေဘေးသင့်ဒုက္ခသည်များအား ကူညီထောက်ပံ့ရေးကော်မတီ၏
(၂၀၁၀) ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် တစ်နာရီလျှင် မိုင် (၁၂၀)ကျော်နှုန်းဖြင့် အင်အားပြင်းစွာ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့သော လေမုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများစွာတို့၏ အသက် အိုးအိမ်နှင့် လယ်ယာများ များစွာပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ သဘာဝလေဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရသော ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနေ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများသည် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများဖြစ်ကြသော ဘုန်ကြီးကျောင်းများနှင့် စာသင်ကျောင်းများတွင် ယာယီနေထိုင်ကြပြီး၊ စားဝတ် နေရေးအတွက် အခက်အခဲများစွာကို ရင်ဆိုင်နေကြရပါသည်။
မုန်တိုင်းသင့်သော ရွာများသည် ပျောက်ဆုံး ပျက်စီးခြင်းများအပြင် လူအသေအပျောက်များစွာရှိသည်ဖြစ်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းလျက် လေဘေးသင့် ဒေသများသို့ သွားရောက်လှူဒါန်း ထောက်ပံ့ကြ မည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ၍ နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် လေဘေးသင့်ဒုက္ခသည်များကို လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် စွမ်းနိုင်သမျှ ပါဝင်ကူညီကြပါရန် ကုသိုလ်အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
လေဘေးသတင်းများ ကြည့်ရှုနိုင်သော ဆိုဒ်များ
ထိုင်းနိုင်ငံ အလှူခံရာဌာနနှင့် Bank Account
Wat Talom, Charan 13,
Khlong Khwang, Phasi Charoen,
Name - Phra Kaweinda
A/C No - 119-234694-4
Bank Name - Siam Commercial Bank, Thailand
Ven. Kavinda (+66-851663197, Email: kavi.inda@gmail.com)
Ven. Aloka (+66-894348411, Email: realsingle@gmail.cm)
Ven. Indobhasa(+66-850603342,Email: indobhasaa@yahoo.com)
Ven. Nanissara(+66-814919143, Email: nanissara@hotmail.com)
Ven. Nyanika(+66-835550824,Email: nyanika.2008@gmail.com)
လမ်း၊ MOON BAKERY အနီး၊ တာမွေအ၀ိုင်းထိပ်၊ ရုံးဖုန်း-၄၃၀၁၇၂၊ အီးမေလ်-rakhine.tay@gmail.com
ဒေါက်တာကျော်သိန်း(နာယက) - ၀၉၅၁၂၇၄၆၇၊
ဦးခင်မောင်စိုး (ဥက္ကဋ္ဌ) - ၅၅၂၁၂၆၊
ဦးဇော်အေးမောင် - ၀၉၅၁၄၀၄၀၇၊
မောင်ရဲထူးအောင် - ၀၉၉၀၄၁၃၉၆၊
ဦးဘိုးတင် - ၀၉၅၀၀၆၉၂၆၊
ဦးမျိုးဆွေ - ၀၉၅၀၀၁၁၈၀၊
ဦးဦးလှမြင့် - ၇၃၀၈၈၉၀၆၊
ဦးဇော်ဝင်း - ၀၉၅၀၀၆၈၂၀၊
ဦးသာမြကျော် - ၀၉၅၁၅၅၄၁၉၊
ဦးဦးမြင့်ကျော် - ၀၉၅၀၆၄၆၅၃၊
ဦးထွန်းနိုင် - ၀၉၈၅၁၀၄၀၀၊
ဦးကျော်နိုင် - ၀၉၅၀၆၁၈၈၄
Posted by Crystal at 11:20 PM5comments
Posted by Crystal at 6:14 PM4comments
crystal တစ်ယောက် ခြေထောက်မှာ ဗွေပါလို့ မြန်မာနိုင်ငံတုန်းကလည်း တစ်နိုင်ငံလုံး အနှံ့နီးပါး အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ ခရီးထွက်နေရပါတယ်။ အခုလည်း အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲ ခရီးယာယီတွေများနေပါတယ်။ ဘဝဆိုဒ်မှာ ပိုစ့်မရေးဖြစ်သေးပေမယ့် အလုပ်ဆိုဒ်မှာတော့ ပိုစ့်လေးတွေကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အားခဲရေးသားနေဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝဆိုဒ်က ပိုစ့်တွေကို ဆက်ရေးရမယ်ဆိုရင်လည်း အချိန်အတိုင်းအတာအရလည်းကောင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မအားမလပ်မှုများကြောင့် မရေးသားဖြစ်ပေမယ့်၊ လောလောဆယ်တော့ Bliss of Us ဒီနေရာလေးမှာ crystal ရှိနေပါတယ်။ လာလည်နိုင်ပါတယ်လို့လည်း crystal သိသော မသိသော မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို ရိုသေလေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။
Posted by Crystal at 3:05 PM3comments
ဒီဆိုဒ်လေးမှာ Bliss of Us ဘုရားပုံတော်များ လှူဒါန်းထားပါတယ် ဒေါင်းလိုက ဒေါင်းပါလေ ။
Khao Chee-Chan; ထိုင်းစာလုံးကို မြန်မာအသံထွက်ရင်တော့ “ခေါက်ချီချန်” ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာတွေကတော့ လေဆာဖြင့် ပစ်လွှတ်ထွင်းထားတာဖြစ်လို့
လွယ်လွယ် လေဆာပစ်ဘုရားလို့ ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပတ္တရားကမ်းခြေကနေ မြို့ပြင်ကို ဆက်ထွက်လာကြတဲ့ အခါမှာတော့ ကျောက်တောင်နံရံမှာ လေဆာဖြင့် ပစ်ဖေါက်ရေးဆွဲထားတဲ့ မြတ်စွာဘုရားပုံတော်ကို ကြည်ညိုသပ္ပါယ်စွာ ဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားပုံတော်ရှိရာ တောင်ခြေကို ရောက်တော့ မှောင်ရီပျိုးနေပါပြီ။ ဘုရားပရဝဏ်နေရာလေးက တော်တော်လေး အေးချမ်းငြိမ်သက်သာယာလျက်ရှိပါတယ်။ တောတွေ တောင်တွေ ရောက်ပြီဆိုရင် မေတ္တာပို့တာလေးကို အရင်ပြုလုပ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်မှာတော့ တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရား ပူဇော်လေ့ရှိတဲ့ “သတသဟဿာရဟ” ဂါထာတော်ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီး၊ ပြုသမျှကုသိုလ်တွေကို အမျှဝေခဲ့ပါကြောင်း။
ဒီပုံလေးထဲမှာ ထေရဝါဒ ထိုင်းဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးက ဦးဆောင်ပြီး
သူတို့အဖွဲ့ကတော့ အုပ်စုလိုက် ရှိခိုးပူဇော်ကြပါတယ်။
crystal တို့သွားတဲ့အချိန်မှာ ကိုရီးကားလှပျိုဖြူခရီးသည်တစ်အုပ်နဲ့ ဂျပန်လှပျိုဖြူခရီးသည်တစ်အုပ်တို့ တိုးအုပ်စုအလိုက် ကားတွေ အသီးသီးရောက်လာကြပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဘုရားရှိခိုးတဲ့သူ တစ်ယောက်တလေမှ မပါတာ စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုပဲလား မသိပါ။
Posted by Crystal at 3:10 PM 1 comments